150MP Sensor နဲ့ HUAWEI ကို Samsung Challenge လုပ်နိုင်မလား?
150MP ဆိုလို့ အရင်တစ်ချိန်တုန်းက Smartphone Camera တွေအကြောင်း ပြောကြရင် Megapixel များတာကို စိတ်ဝင်တစား ဖြစ်ကြတယ်။ လူတွေ အယူဆကိုက MP များလေ ပိုကောင်းလေကိုး…
ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ MP တစ်ခုထဲသာမက Sensor နဲ့ Pixel Size လို Hardware ပိုင်းမှာ တိုးတက်လာတာ သိထားကြမှာပါ။ ထို့နည်းတူ Smartphone Camera အကြောင်းပြောရင် Google ကိုလည်း ချန်ထားလို့ မရဘူးလေ။
Pixel နဲ့ HUAWEI စမတ်ဖုန်းအများစုက AI ပိုင်းနဲ့ အားဖြည့်ထားတာဆိုတော့ Software ပိုင်း လုပ်ဆောင်ချက်တွေက ပိုအရေးပါလှပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Quad Bayer လို့ခေါ်တဲ့ Pixel Binning နည်းပညာကို သုံးလာပြီးနောက်ပိုင််းမှာ Company တွေဘက်က ပိုများလာတဲ့ Megapixel ပမာဏကို Marketing ပိုင်းမှာပါ အသုံးချလာတာကြောင့် Fan တွေဘက်ကကြည့်တဲ့အခါ “စာရွက်ပေါ်က ကိန််းဂဏန်းတွေ” ဆိုပြီး အထင်လွဲစရာဖြစ်လာခဲ့ရတယ်။
Samsung ကနေ 150MP Sensor ထုတ်ရောင်းမယ်လို့ သတင်းကြားစမှာဆို ဒီနည်းပညာကို ထောက်ခံနေကျကိုယ်တွေတောင် နှာခေါင်းရှုံ့မိတဲ့အထိပါပဲ။
Samsung အနေနဲ့ သူ့ Flagship ဖုန်းတွေမှာ 12MP ကို တစိုက်မတ်မတ် သုံးနေရာကနေ 2020 အရောက်မှာ 108MP Sensor ကို သုံးတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းက Fan တွေကို အံ့ဩဝမ်းသာ ဖြစ်စေခဲ့လိမ့်မယ်လို့ ထင်တယ်။
Xiaomi က အစမ်းသပ်ခံအနေနဲ့ စသုံးပြီး DxOMark ထိပ်ပိုင်းကို တက်ပြခဲ့တဲ့ ဒီ Sensor ကို အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး သုံးလာမယ်ဆိုတော့ Smartphone Camera ပိုင်းမှာ Huawei နဲ့အပြိုင် ဗိုလ်လုတော့မယ်ပေါ့။
သိို့ပေမယ့် Galaxy S20 Ultra တကယ်တမ်းထွက်လာချိန်မှာ Autofocus ပိုင်းအားနည်းတာအပါအဝင် လနဲ့ချီပြီး Software မြှင့်တင်မှုတွေလုပ်ပြီးချိန််မှာတောင် DXOMark ရဲ့ Top5ထဲ မဝင်ပဲ လက်လျှော့ခဲ့ရတယ်။
ဒါကြောင့် 150MP က Samsung ရဲ့ နောက်ထပ်ခြေလှမ်းလို့ သိရတဲ့အခါ စိတ်ပျက်မိကြတာ မထူးဆန်းလှ။ သို့ပေမယ့် 150MP ကိို ဘာကြောင့်သုံးချင်ရသလဲဆိုတဲ့အတွေးက ကိုယ်တွေကို ဒီ Sensor အပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုပြန်ဖြစ်စေခဲ့တယ်။
Start with Pixel Binning
အရင်ဆုံး Pixel Binning အမျိုးအစားတွေအကြောင်း အနှစ်ချုပ်ပြောကြည့်တာပေါ့။ ပထမဆုံး Pixel Binning နည်းပညာကို HTC ရဲ့ 16MP Selfie Camera နည်းပညာနဲ့ စပြီးရင်းနှီးခဲ့သလို OnePlus5Series မှာလည်း Low Light Sensor အဖြစ် မြင်ခဲ့ရတယ်။
Quad Bayer လို့အမည်ပေးထားတဲ့4in 1 Binning နည်းပညာက ဒီဘက်ခေတ် Smartphone အများစုရဲ့ Sensor တွေမှာ မျက်မှန်းတန်းမိနေလောက်ပါပြီ။
(48/4=12MP) Nonacell လို့ ခေါ်တဲ့9in 1 binning ကိုတော့ Galaxy S20 Ultra မှာ စသုံးခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးမြင်ထားရတဲ့ Binning နည်းပညာကတော့ Huawei P40 Series ရဲ့ 52MP, Sony IMX 700 မှာ Video ရိုက်ရင်သုံးတဲ့ 16 in 1 နည်းပညာပေါ့။
ခုလောက်ဆို အရောင််တူ Pixel အသေးတွေကို များများ Binning လုပ်လေ၊ အသုံးပြုနိိုင်မယ့် Megapixel ပမာဏ နဲလေဆိုတာ သတိထားမိလောက်မှာပါ။
တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်လည်း Binning လုပ်လေ၊ Pixel Size ကြီးလေဖြစ်တာကြောင့် အလင်းပိုလက်ခံနိုင်ပြီး Low Light မှာပိုကောင်းတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ရစေနိုင်တယ်။
“ဒါဆို Megapixel များများထည့်မယ့်အစား Pixel Size ကိုပဲ ဘာလို့မကြီးပစ်လဲ” လို့ မေးစရာရှိလာတယ်။ ဒါက အချက် (၂)ချက်ကြောင့်လို့ ဆိုရမှာပါ။
ပထမအချက်က နေ့ဘက်လိုအချိန်မျိုးမှာ Megapixel များများနဲ့ ရုပ်ထွက်ပိုကောင်းအောင် လုပ်ချင်တာ။
သို့ပေမယ့် Smartphone Sensor တွေဟာ အရွယ်အားဖြင့် ၁ လက်မတောင် မပြည့်တာဆိုတော့ Pixel size တွေသေးကုန်ပြီး Low Light မှာ Image Quality ထိနိုင်တယ်။
ဒီ ၂ချက်စလုံးအဆင်ပြေအောင် Pixel Binning နဲ့ ပိုများတဲ့ Pixel ပမာဏကို စသုံးခဲ့တယ်လို့ ယူဆတယ်။
နောက်တစ်ချက်က Autofocus နည်းပညာ။ လက်ရှိ Dual PDAF ပါတဲ့ 12MP Sensor တွေဟာ Focus ဖမ်းယူတဲ့အခါ အတော့်ကိုမြန်ဆန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Company တွေဘက်က ရှုခင်းတစ်ခုရဲ့ အနီး၊ အလယ်၊ အဝေး အကွာအဝေးအမျိုးမျိုးက Object နဲ့ Light Data တွေကို ပိုပြီးတိတိကျကျ ဖြစ်စေချင်လာကြတယ်။
အရင်လို Pixel အကြီး ၁ခုကိုပဲ နှစ်ပိုင်းခွဲပြီး အနီး၊ အဝေး Focus ဖမ်းမယ့်အစား Pixel အသေး ၄ခုလုံးသုံးပြီး Data ယူမယ့်နည်းလမ်းကို သုံးချင်တာကြောင့်ပါ။ Huawei P40 Series မှာဆို ဒီနည်းပညာက အတော်ခရီးပေါက်လာခဲ့ပြီဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဆိုလိုရင်းတွေ မလွဲကုန်ခင် Main Topic ဆီ ပြန်သွားကြတာပေါ့။ Pixel Binning ဟာ Pixel Size ကို ကြီးစေပြီး Megapixel ကို နဲစေတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း P40 Pro မှာ 16 in 1 Binning ကို 1080p Video Mode မှာပဲ သုံးနိုင်တာပါ။
Image: The Next News Source
(52/16=3.25MP) ဆိုတဲ့ပမာဏက ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ဆို အတော်နဲတဲ့ ပမာဏဖြစ်နေပေမယ့် Full HD Video (1080×1920= 2MP) အတွက် အေးဆေးလုံလောက်တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း P40 Pro ရဲ့ Full HD Video Mode က စွန်းကြမ်းနေတာပေါ့။ တကယ်လို့ ဒီ နည်းပညာကိုများ 150MP မှာသုံးလိုက်ရင် ဘာတွေပြောင်းလဲသွားနိုင်မလဲ?
(150/16= 9.4MP). ဒီပမာဏဟာ Photo ရော Video အတွက်ပါ လုံလောက်တဲ့ ပမာဏပါ။ (မနှစ်ကထိ Huawei Flagship တွေမှာ 10MP နဲ့ ကြမ်းခဲ့ကြတာဆိုတော့) အထူးသဖြင့် 16 in 1 binning ကို 4K Video အထိ သုံးနိုင်သွားမယ်။
(4K= 3840×2160= 8.3MP) နောက်ပြီး Quality ကောင်းတဲ့ True 8K Video တွေကို မျှော်လင်နိုင်သွားမှာပါ။ (150/4= 37MP) ဒီပမာဏဟာ 8K Video ရိုက်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ပမာဏလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
(8K= 7680×4320= 33MP) လက်ရှိ 108MP Sensor ဟာ Binning လုပ်ရင် 27MP ပဲရှိတာကြောင့် 8K Video ထိ မရသလို Samsung Flagship တွေမှာလည်း 8K ရဖို့ 64MP Tele Sensor ကို ပြောင်းသုံးခဲ့ရတယ်။
ဆိုတော့ 150MP ကိုသာ 16 in 1 Binning နဲ့ သုံးလာခဲ့မယ်၊ Software Support ကိုလည်း ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ဒီ Sensor ဟာ Huawei မှာသုံးတဲ့ Sony IMX 700 ကို ယှဉ်နိုင်ရုံမကပဲ အသာစီးပါ ယူနိုင်မယ့် အလားအလာရှိနေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ပိုများလာမယ့် Megapixel ကြောင့် ပိုကြီးလာမယ့် Sensor Size က ဒီ Sensor ထည့်သုံးမယ့်ဖုန်းတွေကို Camera Size နေရာယူမှုအပိုင်းမှာ အခက်အခဲဖြစ်စေနိိုင်မှာကိုတော့ စိတ်ပူမိတယ်။
နောက်ပြီး Samsung အနေနဲ့ S20 Ultra မှာလိုပဲ9in 1 binning ကိုပဲဆက်သုံးမလား (150/9= 16MP) ဆိုတာ စောင့်ကြည့်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
Image: Samsung Members Community
Camera or Spec
အရင်ကဆို SoC အနိမ့်အမြင့်က ဖုန်းတစ်လုံးရွေးချယ်တဲ့အခါ အဓိကစကားပြောပေမယ့် Flagship တွေရဲ့ SoC တွေက Level တူနီးနီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ Company တွေအနေနဲ့ Camera ဘက်ကို အရင်ထက် အားပိုစိုက်လာတာ သတိထားမိတယ်။
တစ်ချို့ကလည်း ပိုများလာတဲ့ Megapixel ကို လိုလားသလို Camera ကြီးတွေ ဖုထွက်မနေပဲ သင့်တင့်ကောင်းမွန်တဲ့ Software အထောက်အကူပြု Quality ကိုပဲ တောင့်တကြတယ်။ သင်ရော ဘယ်ထဲမှာပါလဲ။
တစ်ခါတစ်လေမှာ Marketing Term လို စာအုပ်မျက်နှာဖုံးလောက်ပဲ ကြည့်ပြီး အကဲဖြတ်တာထက်စာရင် အထဲက စာရဲ့အနှစ်သာရကို လေ့လာတာက ခင်ဗျားတို့ကို Tech နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Knowledge တွေ ပိုပေးစွမ်းနိုင်မယ်လို့ အကြံပေးရင်း အဆုံးသတ်ပါ့မယ်။
၁။ HUAWEI ရဲ့ ဂန္ထဝင်မြောက်လက်ရာတစ်ခု သို့ P40 Series ထူးခြားချက်များ
၂။ Galaxy S20 စီးရီးမှာ ဘာထူးခြားနေလဲ? ဝယ်သင့်လား?
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး Graphics Card နဲ့ GTC 2020 ပွဲကို သွေးဆူအောင် လုပ်လိုက်တဲ့ Nvidia CEO